Beta ọhụrụ nke OxygenOS rutere na OnePlus 5 na 5T | Androidsis
The OnePlus 5 na 5T na-enweta ọnọdụ eserese maka selfies na beta ọhụrụ ha
Edere Ferreno | | Mobiles, OnePlus
New beta nke OxygenOS maka OnePlus 5 na 5T juputara na akụkọ. Ekwentị abụọ dị elu nke akara ndị China enwetaworị beta ọhụrụ a, nke na-emebu, na-eweta ụfọdụ ọrụ ọhụụ. N'okwu a, ndị kachasị ewu ewu na nke a bụ iwebata ọnọdụ eserese maka onwe gị na ekwentị abụọ emepere n'afọ gara aga.
Anyị na-ahụ etu akara a na - esi emelite ekwentị ya ugboro ugboro karịa ka ọ dị na 2018. Ọzọkwa the OnePlus 5 na 5T anatala ọtụtụ mmelite n'ime afọ a. Ma ugbu a, ọ bụ ntụgharị nke beta ọhụrụ maka anyị abụọ.
Nke a bụ beta nọmba 17 nke OxygenOS maka ụdị ndị a dị elu. Ozi buru ibu buru ibu na-abata na OnePlus 5 na 5T bu uzo ihe osise na selfies. Enweghị ekwentị nwere igwefoto ihu abụọ. Ya mere, ihe niile na-egosi na ọnọdụ a ga-ewebata site na ọgụgụ isi.
Ọ ga-eji sistemụ dị ka nke ahụ na Google Pixel 2. Ihe ọhụụ ọzọ na-abịakwute ụdị abụọ ahụ bụ mgbanwe na ọnọdụ egwuregwu. Mgbanwe e mere ka ya interface. Emeputala ozi ohuru maka nchere maka nchere na sistemu ngosi ederede ọhụụ.
Na mgbakwunye, beta maka OnePlus 5 na 5T bịarutere na mmelite nche, nke na-agụnye ndị ọhụrụ kwachie wepụtara maka gam akporo. A na-edozi ụfọdụ obere chinchi, iji nye ahụmịhe kachasị mma na ekwentị abụọ ahụ.
Ozi ndị a niile na-abata na beta nke OyxgenOS maka OnePlus 5 na 5T. Ugbu a ọ dịghị ụbọchị e nyere maka ntọhapụ nke anụ anụ version nke nwelite. Okwesighi iwe ogologo oge, yabụ n'ime izu ole na ole, ha ga-erute ndị ọrụ niile nwere ụdị ndị a site na OTA.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » The OnePlus 5 na 5T na-enweta ọnọdụ eserese maka selfies na beta ọhụrụ ha
HTC U12 Ndụ: middị ọhụrụ ọhụụ ahụ